समाजको राम्रो सपोर्ट नभए पछि के गरे समलिंगी जोडीले ? खुलाए यस्तो रहस्य -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
समाजको राम्रो सपोर्ट नभए पछि के गरे समलिंगी जोडीले ? खुलाए यस्तो रहस्य -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौं- समान लिङ्ग भएका वा समलिङ्गीहरु गहिरो मायाप्रेममा पर्छन् अनि विवाह नै गर्छन् भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–१० का २० बर्षीय रुपक गिरी र काठमाडौंका १८ बर्षीय अनुभव दर्जी समान लिङ्ग भएका वा समलिङ्गी हुन् । उनीहरुले १ बर्ष ७ महिनाअघि विहे गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमा फेशबुकमार्फत चिनजान भई मायाप्रेममा परेका उनीहरु एकअर्कालाई खुबै माया गर्दछन् । फेशबुकमै रुपकले अनुभवलाई प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए ।
त्यसको केही दिनमै अनुभवले पनि रुपकको प्रेमलाई स्वीकार गरे । त्यसपछि उनीहरुबीच आत्मियता बढ्दै गयो । निरन्तर फेशबुकमा भिडियो कल र फोन सम्पर्क भइरह्यो ।
२०७४ मंसिर महिनामा अनुभव रुपकलाई भेट्न झापा आए । त्यसपछि उनीहरुले एकअर्कालाई छोड्न सक्ने अवस्थामा पुगेपछि विवाह गर्ने निर्णय गरे । विगतलाई सम्झदै अनुभवले भने–‘ घरपरिवारबाटै स्वीकार हाम्रो विहेलाई स्वीकार गर्नु भएन, निकै दुःख लाग्यो ।’ अनुभवलाई अहिलेसम्म पनि परिवारले स्वीकार गरेको छैनन् ।
उनी भन्छन्,‘विहे भएदेखि म घर गएको छैन ।’ अनुभवको भन्दा रुपकको परिवार भने फरक रहेछ । रुपकको परिवारले अनुभवसँगको विहेलाई सहर्ष स्विकार गरे ।
‘परिवारको साथ र सहयोगकै कारण आज अनुभवलाई खुशीको साथ राख्न सफल भएको छु’ उनी भन्छन्–‘हामी वैवाहिक जीवनबाट निकै खुशी छौं ।’ झापाको दमकमा घर भाडा लिएर बसिरहेका उनीहरु भन्छन्–‘हामीलाई समाजले हेलाको दृष्टिले हेर्छ ।’
घरपरिवारबाटै स्वीकार हाम्रो विहेलाई स्वीकार गर्नु भएन, निकै दुःख लाग्यो ।’ अनुभवलाई अहिलेसम्म पनि परिवारले स्वीकार गरेको छैनन् ।
–हेर्नुहोस भिडियो …
Prevरङ्गशाला निर्माणमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनको यस्तो विज्ञप्ती हेरी सक्दो सेयर गरौं…
Nextआज पैसा पठाउदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस साउदी, कतार ,मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ…
अब अनलाइनबाट ग्राहक आफैंले घरबाट विद्युत् मिटर रिडिङ गर्न सक्ने…
वुद्ध लामाले ऐलै सम्म पाएनन् पुरस्कार अत्ति भएपछि पठाए यस्तो अडियो (भिडियो सहित)
बिबाह मण्डʼपमै कडा दोहोरी …जेरीका दुलाहा दुलहीको रमाइलो…, (भिʼडियो सहित)
कप्तान पारस भन्छन्,– मौका खेर जान दिँदैनौं।